चेपाङको पीडा, मानवता र राज्य – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
चेपाङको पीडा, मानवता र राज्य
२०७७ श्रावण १८, आईतवार ०८:२९ गते
जनताका गरिबी, पीडा, वेदना र क्रन्दनभन्दा ठूला विषय त वास्तवमा बाटाघाटा, बिजुली बत्ती पनि होइनन् । मानवताको पर्खाल ढल्न थाल्यो भने विकासका कुरा र सिद्धान्तले परिवर्तनलाई कसरी डो¥याउला र ? चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलास्थित चेपाङबस्तीमाथि सरकारकै आग्रहमा गरिको निर्दयी व्यवहारले मानवताको बिजमा आगो लागेको छ । निकुञ्ज र सेनाको टोलीले दुई घरमा आगो लगाइदिए अनि आठ घरमा हात्ती लगाएरै भत्काइदिए । यो विषय गरिबमाथिको दमनकारी सोच मात्रै होइन हाम्रो हुकुमी दादागिरीको प्रतिच्छाया पनि हो । यो घटनाले त हाम्रो देशका नेतृत्वमा अभैm पनि मानवता भन्ने वस्तुलाई बोध गर्ने खुबीको अभाव छ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । झरी बादलको सङ्कट, डुबान, बाढी–पहिरो आदिको विपत्तिलाई समेत ख्याल नगरी एउटा टाउको लुकाउने आधारै मासिदिने सोच निन्दनीय छ । अन्य जुन नीतिले कानुनसम्मत ठह¥याए पनि मानवताको आँखामा त्यो अत्याचार हो । शक्तिको दम्भ हो । क्रुरता हो । निरीह माथिको सोझो दमनकारी सोच र व्यवहार हो ।
जनताको अभिभावक भनेको राज्य हो । दुःखमा राहत दिनुपर्ने अभिभावक आपैmँले दुःख दिन्छ भने उसका लागि राहत कसले दिन सक्छ र ! जनताको दुःखलाई आफ्नो दुःख नसम्झने शैली र व्यवहारले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था भन्दै कोरिएको संविधानको धज्जी उडेको छ । निरीहमाथि गरिने निर्मम दमनकारी प्रवृत्तिले राज्य छ भन्ने आँट नै गर्न सकिएन । गाँस, वास र कपासको आधारभूत आवश्यकताका पक्षबाट जनताको पीडामा मलमपट्टि नगरिएसम्म समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपालीको सिद्धान्त केवल शब्दको लालीपपमात्रै हो । सिद्धान्तका गफलाई घोषणापत्रमा रङ्ग्याएर व्यवहारमा दमन गर्ने सोचले मुलुकले चाहेको नागरिक अधिकारलाई जोगाउन सक्दैन । हिजो राजाका पालामा समेत विपन्न र भूमिहीनलाई जग्गा जमिन दिने तथा जनताको हितका लागि टाउको लुकाउने आधार प्रदान गर्ने विषयमा चिन्ता गरिन्थ्यो । त्यो मानवता त कमसेकम हिजो नभएको होइन । उचित रूपमा व्यवस्थित नभएको मात्रै हो । आज प्रजातान्त्रिक युगसम्म आएर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्याख्या गर्दा ओढारमा बस्ने जनताको अवस्थालाई कसरी नियालिएको छ ? आफ्नो नागरिक हो भन्ने निक्र्योल गरेर जमिन नहुनेलाई जमिन दिने, घर नहुनेलाई घर दिनुको साटो विपन्न, आदिवासी गरिब चेपाङको घरमा आगो लाउने, हात्ती लाएर झुप्रो भत्काउने क्रुरता मान्छेभित्र हुने गुण नै होइन । यस्तो व्यवहारले राज्य पनि छ भन्ने आधारै कसरी रहला ?
हो, वन अतिक्रमण गर्नु नियम विपरीत होला । ती समुदायका मानिसहरूलाई त्यो जग्गा खाली गर भन्दा मानेनन् होला । यो उनीहरूको दोष हुँदो हो तर तिनको अवस्था र बाध्यतालाई सरकारका तर्पmबाट उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन र ? कमसेकम पुनर्वासका लागि सरकारले जोहो गरिदिँदा देशको ढुकुटी सक्किहाल्छ भन्ने भए कुनै एनजीओ, आइनजीओलाई भन्न सकिन्थ्यो होला । नत्र जनताले नै सहयोग गर्थे होलान् । के उनीहरू त पुस्तौँदेखि हाम्रै नेपाली भाइबन्धु होइनन् र ? मानवतालाई नै कुल्चिएर सिद्धान्तका चिल्ला कुराले समृद्धिको लक्ष्यलाई कसरी टेक्न सकिएला ? माथिल्ला तहमा चिल्ला गाडी चढ्ने, ठूला घरमा बस्ने, राम्रो लाउने र मीठो खानेहरूले भ्रष्टाचार गरेर पनि खुलेआम बसेका होलान् । जब जनता नै सुखी हुँदैन, जब जनताले सरकारकै कारण आँशु बहाउनुपर्छ भने त्यहाँ अन्यायको दुर्गन्ध पैmलिएकै छ ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा राज्यले सोच्नुपथ्र्यो । ती कुनैै भवितव्य नभई सरकारद्वारा नियतवस जलाइएका, भत्काइका घरका बारेमा सोच्नु आवश्यक थियो । तिनका लालाबालाको अवस्था, तिनको मनको पिरलोलाई पनि ध्यान दिइनु पर्ने विषय त राज्यकै काँधमा हुनुपथ्र्यो होला । अहिले बाढी, पहिरो, डुबानका कारण पीडित परिवारलाई सरकारले सहयोग गर्नुपरेको अवस्था छ । यदि हात्तीले घर भत्कायो भने, आगलागी भयो भने पनि त सरकारले राहत दिनुपथ्र्यो होला । त्यसैले बर्खामासमा ती विपन्न चेपाङ बस्तीमा अत्याचार गर्नु सामन्ती संस्कारको उपज हो । सदियौँदेखि नेपाली भूमिमा बसेका नेपालीले अन्त कतै नपाएर एउटा वनको अनकन्टार क्षेत्रमा जीवन चलाइरहनुपर्ने उनीहरूको रहर होइन गरिबीको बाध्यता थियो । के सरकारले एउटा सरकारी जमिनमा तिनको अस्तित्व विकास गराउने गरी आधार तयार पार्न सक्दैन ? धुर्मुस–सुन्तलीले बस्ती निर्माण गरेर उदाहरणीय कार्य गरे जसरी योजना तय गर्न सकिँदैन ? यो गम्भीर विषय हो ।
मानवता संविधानका अक्षरमा लेखिरहनुपर्ने विषय नै होइन । चेली–माइतीको सम्बन्धका बारेमा, दाजु–बहिनी, आमा–छोरा, बाबु–छोरीको सम्बन्धका विषयमा कतै पढिएको हुँदैन । मान्छेले दुःख परेपछि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै संविधानको पानामा लेखिएकै छैन । मानवता वास्तवमा मानिसको प्राकृतिक गुण हो । समाजसेवी, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले जे जसरी सेवाको भाव राखिरहेको देखिन्छ त्यो मानवताले प्रेरित मान्छेकै स्वभावको उपज हो । मान्छेभित्रको क्रुरताले मानवतालाई जित्यो भने सामाजिक सम्बन्ध खल्बलिन्छ । समाजमा दुःख हुन्छ तब समाजमा शत्रुता बढ्छ । राज्यले अहिले मानवता भुल्दै पनि गएको छ । आफ्नो मर्यादाभित्र जनताको दुःखलाई सम्बोधन गर्न बिर्सिरहेको छ । हाम्रो मुलुक विकासोन्मुख अवस्थाकै गतिमा छ त्यसैले पनि धेरै दुःखी गरिबलाई कमाइखाने जमिनको अभाव छ । आफ्नो स्वामित्वको जमिन नपाएर तड्पिनुपरिरहेको छ । अर्काको जग्गा कमाएर अधियाँ र कुत गर्दै जीवन धान्नु परिरहेको छ । यसको अर्थ गरिबहरू अल्छी भएरमात्रै गरिब भएका होइनन् । भएको सम्पत्ति सबै उडाएकै कारणले गरिब भएका होइनन् । पुख्र्यौली सम्पत्तिको जोहो गर्न नजानेर गरिब हुनेको सङ्ख्या धेरै कम होला तर टेक्ने भूमि नै नभएर पुस्तौँपुस्ता सुकुमबासी बनेका नेपालीको दुर्दशामा देशले दुख्न जान्नुपर्छ ।
आज स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको आर्थिक स्थिति र चेतनाको स्तरलाई चाहँदाखेरि निष्पक्ष तवरमा निक्र्योल गर्ने खुबी राख्छ । उसको हातमा भएको अधिकारलाई जनताकै जीवनस्तर उकास्न भनेर सदुपयोग गर्न सक्छ । बोल्नेको पीठो बिक्छ अनि नबोल्ने चाहिँ सधैँ पेलिइरहन्छ भने त्यो न्यायको विषयमा हेक्का राख्ने काम स्थानीय सरकारको हो । आफ्नो गाउँपालिकामा, आफ्नो वडामा भूमिहीन नागरिक नहोऊन्, सुकुमबासी कोही पनि नहोऊन् । केही जमिन दिन सकियोस् । आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा एउटा घर बनाएर आफ्नो काम गरेर जिउन सक्ने गरी जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा सक्ने र हुनेले सहयोग गर्न पनि त सकिन्छ । हुने खाने र हुँदा खानेको सोच्ने शैली, लवज, चेतना स्तर नै फरक हुनुको कारण अभाव र पूर्णताको अन्तर नै हो । विपन्न मानिसको हातमा सम्पत्ति र चेतना प्रदान गर्दै जाने नीतिबाट मुलुकले समृद्धिको सपनालाई बुन्नुपर्छ । यसको अर्थ सम्पन्न भइसकेकालाई दबाउनुपर्छ भन्ने पनि त होइन । आर्थिक क्रान्तिका कोणबाट हेर्दा विपन्नहरू शोषण र दमनको सिकार हुनु हुँदैन । श्रम गरेर बाँच्ने र समयलाई श्रममा सदुपयोग गर्ने नीतिबाट मुलुकले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन सक्छ ।
सडक छेउमा खुला आकाशमुनि बर्सेनिका सन्तान च्यापेर मैलोधैलो भएर हिँड्ने मानिसको गरिबीलाई देखेर मुलुकका नेतृत्वमा नयाँ सोच जाग्दैन भने समृद्धिको वर्षौँदेखिको लयमा कसरी सुमधुर सङ्गीत भरिन्छ ? नेपाल र भारतको खुला सीमाका कारण भित्रिने विपन्न भारतीय नागरिकमाथि पनि छिः छिः र दुरदुर गर्नु मानवीय स्वभाव होइन । आखिर मान्छे त मान्छे नै हो । गरिबीले नै धेरै हदमा मानिसलाई चोर, डाका, फटाहा बनाएको हुन्छ । यसर्थ आगन्तुक सुकुमबासीको समेत तथ्याङ्क लिन र राख्नमा आपत्ति नहोला किनकि ती मानिस मूलतः शहरी क्षेत्रमै घुमिरहेका हुन्छन् । अर्कोतिर सुस्त मनस्थिति भएर बाटामा हिँडिरहने सडक मानवहरूलाई सकेसम्म उपचार गर्न सकिन्छ भने उपचारको एउटा नीति बनाएर कमसेकम मानवताको आँखाले हेर्न सिकौँ । तिनलाई पनि गाँस, बास र कपासको जोहो गरौँ किनकि तिनीहरू जे जसरी बाँचिरहेका भए पनि राज्यद्वारा सद्भाव राखौँ । तिनको अवस्थालाई पनि नागरिकका हैसियतले हेर्नु राज्यको अहम् दायित्व हो जुन कुरालाई सदियौँदेखि बिर्सिँदै आइएको छ । किनकि, उनीहरू अधिकार माग्न सक्दैनन्, उनीहरू अल्पसङ्ख्यक वर्गमा परेका हुन्छन् । तिनका लागि बोलिहाल्ने पनि अल्पमतमा परेका हुन्छन् ।
हाम्रो देशमा विशेष गरेर तराई मूलमा भारतीय सुकुमबासीहरू नेपालमा आउँछन् भन्ने विषयमा धेरै चर्चा गरिन्छ । यसको सोझो र राम्रो आधार नै स्थानीय सरकारद्वारा अबको २०७८ को जनगणनामा सबैको स्मार्ट कार्ड बन्ने गरी सूचना अभिलेखीकरण गरिनु आवश्यक छ । हाम्रा नागरिकलाई नागरिकता दिलाऔँ । भारतका नागरिकका लागि भारत सरकारलाई नै सुम्पने नीति बन्नुपर्छ । हाम्रो नागरिकमध्येमा रहेका सुकुमबासी, घरबारविहीन, विपन्नको दर निर्धारण गरेर स्थानीय सरकारको सहयोगमा तिनको जीवनस्तर उकास्ने पद्धतिको थालनी हुनु आवश्यक छ । अभियानका रूपमा नै जनताको समृद्धि विकासलाई राज्यले कडाइका साथ सुचारु गर्ने हो भने असम्भव केही पनि देखिँदैन ।
चितवन । बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामनगर चितवनले चार महिनाको अवधिमा आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न आर्थिक प्रलोभन देखाउने १५...
अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि